15 Nov 16, 00:53
မောင်မောက်: ဘာသါပြန်ထားခြင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတပါးအနေဖြင့် ထောက်ခံမကိုကားသင့်ပါ။ ကာလာမသုသာန် အရ ချင့်ချိန်ကိုးကါးပါ။
15 Nov 16, 00:50
မောင်မောက်: အစေါင့်ရှောက်မရှိသော သမီးအရင်းကိုဖခင်အရင်းမှ ကျူးလွန်လျှင် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံမထိုက်ပါ ဆိုသည့်အချက်ကို လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါ။ ဘုရားဟောထားပါသလား။ အကယ်၍ဟောထားသည်ဆိုလျှင်လည်း မွတ်ဆလင်နွယ်သောပါဠိဆရာတို့က ဘာသြါ
1 Sep 16, 08:03
19 Mar 16, 20:52
victor: ဇလွန် ပြည်တော်ပြန်ဂါထာ နဲ့ အသံထွက်လိုချင်လို့ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1 Nov 15, 03:57
နောင်လတ်(မန်း): မပါရှိတာအတွက် တပည့်တော် အဲ့သည့် ဗုဒ္ဓခေတ် တိုင်းနိုင်ငံများနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မရှင်းတဲ့အတွက် ဖြေကြားညွှန်ကြားတော်မူပါဘုရား.. ဦးတင်ပါတယ်ဘုရား
1 Nov 15, 03:55
နောင်လတ်(မန်း): ဒါပေမယ့် အဲ့သည့်ထဲမှာ မြတ်စွာဘုရား ခမည်းတော်တို့ နေပြည်တော်ဖြစ်တဲ့ ကပိလဝတ် တို့ .ဒေဝဒဟ တို့ကို မတွေ့ပါဘုရား..။ အဲ့လိုပါပဲ.. ရာဇဂြိုဟ်၊ သာဝတ္တိ၊ ဝေသာလီ၊ ကောသမ္ဘီ၊ ကောလိယ... စတဲ့ ဗုဒ္ဓဝင်များထဲမှ တိုင်းမျာ
1 Nov 15, 03:53
နောင်လတ်(မန်း): ၆။ မလ္လာတိုင်း၊ ၈။ စေတီတိုင်း၊ ၉။ ဝံသတိုင်း၊ ၁၀။ ကုရုတိုင်း၊ ၁၁။ ပဉ္စာလတိုင်း၊ ၁၂။ မစ္ဆတိုင်း၊ ၁၃။ သူရသေနတိုင်း၊ ၁၄။ အဿကတိုင်း၊ ၁၅၊ အဝန္တိတိုင်း၊ ၁၆။ ဂန္ဓာရတိုင်း၊ ၁၆။ ကမ္ဘောဇတိုင်း လို့ မှတ်သိရပါတယ်ဘုရား
1 Nov 15, 03:52
နောင်လတ်(မန်း): အရှင်ဘုရား... မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်က အိန္ဒိယမှာ တိုင်း ၁၆တိုင်း ထင်ရှားတယ်လို့ဆိုထားပြီး အဲ့သည့် ၁၆ တိုင်းဟာ ၁။ အင်္ဂတိုင်း၊ ၂။ မာဂဓတိုင်း၊ ၃။ ကာသိတိုင်း၊ ၄။ ကောသလတိုင်း၊ ၅။ ဝဇ္ဇီတိုင်း၊ ....
27 Aug 15, 20:53
Wai Yan: အရှင်ဘုရား ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာစွာဖြင်. သာသနာ.အကျိုး လောကအကျိုးဆထက်တပိုး သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဘုရား သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား
27 Aug 15, 02:00
Wai Yan: ဗဟုသုတအနေနဲ.မေးလိုပါတယ်ဘုရား ဂါတမဗုဒ္ဒလက်ထက်မှာ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် ဗျာဒိတ်ပေးခြင်းခံရတဲ. ဘုရားအလောင်းတော် ဘယ်နှစ်ပါးလောက်ရှိပါသလဲဘုရား
22 Aug 15, 20:15
Wai Yan: ဖြေကြားပေးတဲ.အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရား အရှင်ဘုရားသည်လဲ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာစွာဖြင်. သာသနာ.အကျိုး လောကအကျိုးဆထက်တပိုး သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဘုရား သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား
17 Jul 15, 19:47
lknt: ကုသိုလ်တော့များပါတယ်… သားကိုရှင်ပြု အမေကတရားကျင့် ဒါဆိုရင်တော့ နီးစပ်ပါတယ်… စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေ…
17 Jul 15, 19:46
lknt: မမှန်ပါဘူး… ဒီလိုသာပိတ်ရင် ရဟန်းအမေတွေ ထကမှာပေါ့… လုပ်ချင်စိတ်ပေါ်အောင် ပြောရင်းကနေ မိရိုးဖလာ လွဲကုန်တာပါ.. မွေးစားသားဆို မပိတ်ဘူးပြောတာလည်း လွဲတာပါဘဲ…
17 Jul 15, 19:42
lknt: အဖြေနောက်ကျသည့်အတွက် သည်းခံပါ... စိတ်ျမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေ...
17 Jul 15, 19:41
lknt: အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့တော့တွေ့တယ်... ဒီနေရာမှာပါ... http://www.palitext.com/JPTS_scans/JPTS_28_2006.pdf
17 Jul 15, 19:40
lknt: အနာဂတံသကျမ်း မဟုတ်ပါ အနာဂတ၀ံသကျမ်းဖြစ်ပါတယ်… ထေရ၀ါဒကျမ်း မဟုတ်ပါ…
17 Jul 15, 19:36
lknt Buddha win 2: http://picasaweb.google.com/105713778835255240562/Maha_Buddhawin_Mingun_2?authkey=Gv1sRgCPy1nefljKq5AQ&feat=embedwebsite#5546618098387432850
17 Jul 15, 19:34
lknt: အရှင်ယသမထေရ်က သုဇာတာရဲ့သားမှန်ပါတယ်… နို့ဆွမ်းးမလှူခင် နှစ်နှစ်ဆယ်လောက်မှာ ယသသတို့သားဖွားတာပါ…
17 Jul 15, 02:37
nwaye: အရှင်ဘုရား အမျိုးသမီးတွေဟာ သားယောက်ကျားလေးမွေးပီး ရဟန်းဘောင်သွပ်သွင်းနိုင်ရင် အပယ်တံခါး ပိတ်သည်ဆိုသည်မှာ မှန်ပါသလားဘုရား...... မွေးစားသားဆိုလျင်မပိတ်ဘူးဟုပြောကြသည်မှာ မှန်ပါသလား ဘုရား ....
29 Jun 15, 03:16
Wai Yan: အရှင်ဘုရား ကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင်. ခန္ဒာ.၀န်ကို သာသနာ.၀န်ကို လွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဘုရား